निर्मलालाई देशभर चिनाउने 'आइकनिक' फोटोमा लुकेको कथा (#WhoKilledNirmala श्रृंखला १)
24th November 2018, 06:00 pm | ८ मंसिर २०७५
'आन्टी, आज रोशनीको घरमा पढ्न जानु छ। बाबुलाई पनि लिएर जान्छु नि है?'
'पर्दैन लैजान, फर्किएर आएपछि घरमा लगेर खेल्नू,' मञ्जुले नकारिन्।
'हस्' भन्दै निर्मला साइकल चढेर रोशनीको घरतर्फ लागिन्।
त्यसको केही दिनपछि नै निर्मलाको एउटा फोटो सबै मिडियामा छाउन थाल्यो - एउटी निर्दोष पीडित किशोरीको रुपमा जसको निर्मम हत्या भइसकेको थियो।
निर्मला घरबाट साथीको घरतर्फ जाँदै गरेको अन्तिम पटक देख्ने मञ्जु नै थिइन्। अहिले सारा नेपालले चिन्ने निर्मलाको 'आइकनिक' फोटोको मञ्जुको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध छ।
दशैँमा कलाकार सुनील सिग्देलले निर्मलाको यही फोटोमा देवीको रुप 'फ्युजन' गरेर चित्र बनाए- 'माई गडेसेस लस्ट दी ब्याटल'। चित्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।
यो 'आइकनिक' फोटोको पछाडि पनि एउटा कथा छ। निर्मलाको यो फोटो उनको 'सिङ्गल' फोटो भने हैन।
निर्मलाको न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेको समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले सुनाइन्, 'घर, स्कूल, साथीभाइको मोबाइल कहीँ कतै फोटो भेट्नै मुस्किल भयो।'
उनले थपिन् 'पछि एउटा भिडियो फेसबुकमा भेटियो। हामीले सोधखोज गर्‍यौँ। त्यही भिडियोसँगै फोटो पनि खिचिएको रहेछ। ग्रुपमा भएको त्यही फोटोमा निर्मलामात्र लाई क्रप गरी फोटो निकाल्यौँ। क्रप गरेको फोटो निर्मला भन्दा मेच्योर देखिन्छ तर फोटोमा देखिए जस्ती ठूली थिइनन् उनी। '
त्यो भिडियोले उनलाई झनै मर्माहत् बनायो। 'उहाँले नै त्यो भिडियो मध्याह्न १२ बजेर १२ मिनेटमा फेसबुकमा हाल्नु भएको हो,' श्रीमती मञ्जुले भनिन्।
'क्रप गरिएको फोटो हेर्दा उनको उमेर बढी जस्तो देखिन्छ। तर, हैन बिचरी सानी थिइन्। त्यो फोटोमा उनी जस्तो थिइन्, त्यस्ती देखिएकी छैनन्', मञ्जुले सुनाइन्।
'टिभी हेर्न भन्दै हाम्रोमा नै आउँथिन्। एकछिन हेरेपछि ममीले मार्नुहुन्छ भन्दै फर्की हाल्थिन्। घरबाट कतै निस्किने स्वभाव नै थिएन,' उनले भनिन्।
'रोशनीलाई म राम्रोसँग चिन्छु। निर्मलाको घरमा आइरहन्थिन्। आन्टी के छ खबर भनेर राम्रो सँग नै बोल्ने गर्थिन्। असल केटी थिई,' मञ्जुले सुनाइन्, 'घटना भइसकेपछि मेरो रोशनीसँग भेट भएको थियो। तर त्यतिबेला भने उनले पहिले जसरी बोलिनन्।'
(निर्मलाको घरबाट उनले पढ्न जाने भनेको रोशनी बमको घर कति टाढा छ? बाटो कस्तो छ? उनलाई पढ्न गएको देख्ने र फर्केको देख्ने कोही छन् कि छैनन्? घटनास्थल कस्तो छ? यो विषयमा पहिलोपोस्टको स्थलगत रिपोर्टिङ अर्को पटक)